सहरको कथा – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
२०७१ बैशाख २२, सोमबार ०२:२५ गते
पछिल्लो समयमा मानिसहरुको बसोबासको रूचि गाउँमा भन्दा सहरतिर नै बढेर गएको छ । रोजगार वा अध्ययनको बाध्यतामा परेर सहर पस्नु त स्वाभाविक मान्न सकिन्छ, तर सुख–सयलको नाममा अनि बच्चालाई ‘क ख रा’ सिकाउने बहानामा जुन सहर पस्ने चलन बढ्दै गइरहेको छ, यो वास्तवमा समस्याका रुपमा देखा परिरहेको छ । सहरको घरमा भाडाको एउटा सानो कोठा, एक छेउमा ग्यास चुलो र अर्को छेउमा एउटा बिस्तारा अनि त्यसभित्रै पर्ने गरी कपडाको हेंगर र किताबको ¥याक पनि । अधिकांश कोठामा बस्नेको दैनिकी यस्तै–यस्तै कोठाबाट सुरू हुन्छ, सहर–बजारमा ।
घरका कोठाजस्तै लथालिंग छन् सहरहरु पनि । पछिल्लो समयमा जुनै सहर पनि व्यवस्थितभन्दा बढी अस्तव्यस्त नै बढी छन् । तर पनि मानिसहरु किन सहरतिर मोहित छन्, बुभ्mन सकिँदैन र बुझिएछ भने पनि भन्न सकिँदैन ।
कहीँकतै, कुनै कुरामा पनि आफूलाई व्यवस्थित गर्न नसकेका यी सहरका अरु पात्रसँग धेरै भयो म पनि सँगै छु, एउटा अर्को पात्र
बनेर । यो वा त्यो जुनै सहरको कुरा उस्तै नै हो । सहरमा धेरै मानिसहरु बस्छन्, तर मान्छे मान्छे नै बनेर बाँच्नेहरु भने अति कम छन् । सहरमा धनी पनि छन्, गरिब पनि छन् । गाडी चढेर महलमा बस्ने पनि छन्, अनि बोरा ओढेर सडकमा सुत्ने पनि छन् । विचारले निर्देशित पनि छन्, विचारबाट विचलित पनि छन् । विचारमा विचलित हुनेहरु त अझ धेरै नै मालामाल पनि छन् । बदलाको राजनीति गर्नेहरु पनि छन् र विवेकको राजनीति गर्नेहरु पनि छन् । तर, बदलाको राजनीति गर्नेहरु नै बढी सन्तोषी छन् । विचलित र बदला भावका मानिसहरु कि छिट्टै महलमा छन्, कि छिट्टै सडकमा छन् ।
सडकमा आउने र महलमा बस्नेहरुका आ–आप्mनै कथा छन् । सहरभित्र सडकमा बस्ने र महलमा बस्ने कोही पनि खुशी भने छैनन् । सडक र महलमा बस्ने दुवै थरीमा एउटा कुराको भने समानता छ, त्यो के भने दुखियापन । सबैको आप्mनो आप्mनो इच्छा र चाहनाले सहरका कोही मान्छे पनि सुखी र सन्तोषी भने छ्रैनन् । बसाइँ सडक, कोठा वा महल जे होस्, चाहना त्यहीअनुसारका छन् र धेरै मानिस त्यसैको पछिपछि दैडिरहेका छन् ।
यही सहरमा संघर्ष गर्दागर्दै कति पुस्ताले जीवन–लीला नै समाप्त पनि गरिसके । यो सहरमा आजभोलि हुने र नहुनेका बीचमा पनि धेरै कुरामा समानता पाउन थालिएको छ । नहुनेले नसकेर बाध्यतामा ढिँडो खान्छ, हुनेले पनि रहरले भए पनि ढिँडो खान्छ । नहुनेको सवारीसाधन नै आप्mनै खुट्टा हुन्छ, धनीहरु पनि मर्निङ वाक भन्दै हिँड्छन् । नहुनेले नसकेरै टालेको कपडा लगाउँछ, सक्नेले फेसन भन्दै टालो हालेको कपडा लगाउँछ । सडकमा भेटिने असहाय, अपाङ्ग, असक्त कसैप्रति पनि संवेदनशील छैन यो सहर । कति निर्दयी छ यो
सहर । समय आएपछि चिनेकै मान्छे पनि चिन्दैन यो सहर, देखेकै मान्छे पनि देख्दैन यो सहर । हरेक कुराको आपूmअनुकूल व्याख्या गर्छ, यो सहर र पनि दिनहुँ सहरतिरै थुप्रिएका छन् मान्छेहरु ।
मानिस सहरमा बस्नु र गाउँमा बस्नुमा व्यक्तिको रूचि र बाध्यता दुई कुरा हुन्छन । कति अवसरका कारण सहरमा बसेका हुन्छन् भने कति व्यक्तिगत रूचिका कारण पनि सहरमा बसिरहेका हुन्छन् । धेरै कुराको अवसर गाउँसँग तुलना नै गर्न नमिल्ने गरी सहरमा बढी
हुन्छन् । प्रकृतिका धेरै कुरा गाउँमा छन्, यसो हुनु स्वाभाविक पनि हो ।
सहरमा प्रतिस्पर्धा छ, हार्दिकता छैन । सहरमा सपना छ, तर योजना छैन । सहरमा निराशा छ, आशा
छैन । प्रश्नैप्रश्नले भरिएको यो सहरमा उत्तर खोज्नेहरु धेरै हराइसके । एउटा गाउँबस्तीले बीस वर्ष लगाएर उत्पादन गरिदिएको मान्छेभित्रको मानवता एउटा सहरले क्षणभरमै नष्ट गरिदिन्छ । यी र यस्तै धेरै कुराहरु जान्दाजान्दै पनि मानिसहरु सहरमा बस्न बाध्य छन् । भएका भौतिक सुविधा गाउँभन्दा सहरमा बढी छन् । अहिलेका अधिकांश मानिसहरु आत्मिकभन्दा पनि भौतिक सुखमा रमाउन चाहन्छन् । यस कारण पनि सहरमा बसाइँसराईको चाप बढिरहेको छ । सहरतर्फको यो चाप सधैँका लागि टिकाउ नरहन पनि सक्छ । मानिसलाई खास–खास समयमा खास–खास कुरामा रूचि हुने गर्दछ । भनिन्छ, मानिस फेरि प्रकृतितिर नै फर्कंदै छ ।
भौतिक विकासको चरम अवस्थामा पुगेपछि मानिस प्राकृतिक कुरासँग लोभिने र अरु सबै कुरालाई भूmट अनि प्रकृतिलाई मात्र सच्चा देख्ने कुरा यो वास्तविकतासँग नजिक हुने गर्दछन् । सहरको एउटै मात्र विशेषता भनेकै अवसरहरु कब्जा गरी बस्नु हो । सहरमा भीड छ र त अवसर पनि छ । यो सहर अवसरहरु कब्जा गरी बस्छ र त मानिसहरु सहर आउन बाध्य छन् । जब अवसरहरु सहरबाट गाउँ–गाउँसम्म पुग्छन्, अनि त्यहीँबाट सहरप्रतिको यो मोह क्रमशः भंग हुन थाल्छ, अनि सहर र गाउँका बीच तुलना गर्न नसकिने गरी सहर पछाडि र गाउँअगाडि बढ्न सुरू हुन्छ । सबै सहरका जरा गाउँसम्म फैलिएका
छन् । त्यसैले गाउँको भरमा नै सहर अहिलेसम्म टिकिराखेको छ । यो सहरलाई चाहिने सबै कुराको स्रोत नै गाउँ हो । गाउँ नहुँदो हो त सहर कसरी सहर रहिरहन सक्थ्यो
होला ? यो सहर धेरै कुरामा गाउँसँग नै निर्भर छ । सहरमा त एउटा छिमेकीले अर्को छिमेकी चिन्दैन । सहरको एउटा कुनो सहरको अर्को कुनोको आलोचनामै आप्mनो समय खेर फाल्छ । कसैको राम्रा कामभन्दा नराम्रा कामको चर्चा छिटो र चारैतिर फैलाउन हतार हुन्छ, यो सहरलाई । सहरमा बस्ने मानिसहरु परिकल्पना मात्र गर्न सक्छन्, परिवर्तन गर्ने त गाउँ नै हो । परिवर्तन र परिश्रमको सबै बल गाउँबाटै प्राप्त गर्ने यो सहरको आप्mनै तागत भने अत्यन्तै कम छ । सामाजिक मूल्य र मान्यतामा उच्च भावनाका मानिसहरु सहरमा पाउनै मुस्किल छ । सहरमा दयामायाका कुरा उच्चारणमा मात्र हुन्छन्, कार्यान्वयनमा हुँदैनन् । सामाजिक जीवनमा सक्रिय व्यक्तिको मह¤व पनि सहरमा कम र गाउँमा बढी हुने गर्दछ । तैपनि, सहरमा मानिसहरुको आगमन बाक्लिँदै गएको यथार्थ भने सत्य हो । बाहिरी वातावरणको आवरणले गर्दा सहरमा मानिसहरुको आगमन जति बाक्लिँदै गए पनि त्यसअनुरुपको आत्मीय सन्तोष भने प्रतिबिम्बित हुन सकेको छैन । अधिकांश सहरहरु कंक्रिटका सहर बन्दैछन् । प्रकृतिमा पाइने हावासमेत शुद्ध भेट्टाउन गाह्रो छ सहरमा । प्रकृतिमा पाइने हावापानी स्वच्छ नपाइने यो सहरमा अरु कुरामा शुद्धताको के आशा राख्नु ?
अर्काको योग्यता र क्षमतामा भर पर्ने सहरमाथि नै धेरै मानिसहरु भर परिरहेका हुन्छन् । आजको वैज्ञानिक युगमा पुराना कुराबाट माथि उठ्न भन्दै मानिसहरु आधुनिक बन्ने होडमा आप्mना मौलिकताहरु भुलेर सहरिया बन्ने होडमा लागिपरेका
छन् । यो सबै हुनुको पछाडि अहिलेको प्रविधिको भूमिका अहम् छ । मानिस सहर र गाउँ जहाँ रहँदा, बस्दा पनि सकारात्मक कुरा लिएर बाँच्न आवश्यक छ । मानिस–मानिसबीचको सम्बन्ध र समुदाय–समुदायबीचको सम्बन्ध राम्रो हुन सकेन भने भोलि गाउँ पनि गाउँजस्तो नहुन सक्छ र सहर पनि सहरजस्तो भएर नरहन सक्छ । जे होस्, तपाईं जहाँ रहेको भए पनि सुख–शान्तिसँग रहनुहोला ।